'एसइईको नतिजा कमजोर होइन' - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
भक्तपुर । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसर्ईई) को नतिजा कमजोर नरहेको दावी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलले पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन नभएका कारण एसईईको नतिजा कमजोर देखिएको बताए। आईतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पाठय्क्रमको उद्देश्य अनुसार पठनपाठन गराउन पनि सबै विद्यालयहरुलाई सचेत गराए।
अध्यक्ष पौडेलले ग्रेडिङका कारण एसइईको नतिजा कमजोर देखिएको भनाइ पनि सत्य नभएको स्पष्ट पारे। उनले लगानीको अभावमा पनि सरकारी विद्यालयको पठनपाठन कमजोर भएको जिकिर गरे। अध्यक्ष पौडेलले एसइईको परीक्षा प्रणालीमा भने व्यापक सुधार आएको दावी समेत गरे।
शनिबार सार्वजनिक एसइईको परीक्षाको नतिजा कमजोर देखिएको छ। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले भने नतिजा कमजोर नभई पठनपाठन कमजोर रहेको तर्क गरे। उनले एसईई परीक्षाको नतिजामा सुधार ल्याउन पाठयक्रम अनुसार पठनपाठनमा सुधार ल्याउनुको विकल्प नरहेको पनि बताए।
बोर्डले एसईईको नतिजा अपेक्षा अनुसार नभएको भने स्वीकार गरेको छ ।